संकिर्ण जातीय विभेद कायम कहिलेसम्म ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
संकिर्ण जातीय विभेद कायम कहिलेसम्म ?
बैतडी, २२ जेठ
विभिन्न अभियानका बाबजुद पनि जातीय विभेद अझै न्यूनीकरण हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन ।
सरकारले जातीय विभेद अन्त्यको घोषणा गरेको १२ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सोमबार बैतडीमा गरिएको मिडिया संवाद कार्यक्रमका सहभागीले हरेक सचेत नागरिकले जातीय विभेद अन्त्यको पहल थाल्नु पर्ने बताएका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले अहिले पनि हरेक ठाउँमा विभेद कायम रहेको बताए । उनले हरेक व्यक्तिको मनमा केही न केही कुराप्रति विभेदको भावना हुने भएकाले सबैले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले पछिल्लो समयमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । संघका जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती नेपालीले भावी पुस्ताका व्यक्तिले जातीय आन्दोलन गरिरहनु नपर्ने गरी सबैले जातीय विभेद विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने बताइन ।
यस्तै, नागरिक समाज, बैतडीका सचिव करन दयालले सबै जनप्रतिनिधि जातीय विभेदविरुद्धको अभियानमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिकारकर्मी लामो समयदेखि विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उहाँले समाजबाट जातीय विभेदको चाँडै अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा दशरथचन्द नगरपालिकाका ११ वटै वडाका दलित जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो । सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन जातीय विभेद अन्त्य भएको घोषणा गरेको सम्झनामा बैतडीसहित विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गरिएका छन ।